China Lightall Transparent LED Display orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Szlightall
Fanehoana taratra LED mangarahara
Ny fampisehoana LED mangarahara dia tsara amin'ny haingon-trano, famoronana endrika ary fampiasana dokam-barotra, miasa mitovy amin'ny efijery LED mahazatra izy io, mety indrindra amin'ny rindrina fananganana fitaratra anaty trano. Ny sarimiaina 3D noforoniny dia hitondra traikefa mahavariana sy mazava, ary mahita amin'ny alàlan'ny fitaratra ny olona nefa tsy manakana ny fahitana.
1.Shopping Mall Transparent Indoor ivelan'ny varavarankely Glass Led Display
Fampisehoana mangarahara tarihin'ny matihanina, hazavana ny varavarankelyo
Mangarahara avo miaraka amin'ny taha 75% an'ny mangarahara ho an'ny aloha sy aoriana.
Afaka mahita ny horonantsary sy sary amin'ny alàlan'ny fitaratra mazava tsara ny olona nefa tsy misy fisakanana manakana.
Mazava be, manodidina ny 7kg ny tontonana nateraka tsirairay
Fikolokoloana eo aloha.
Fanaraha-maso amin'ny 3G, 4G, USB ary HDMI.
Vita ny fandefasana horonan-tsary sy sary amin'ny alàlan'ny APP terminal.
Ampiasaina be amin'ny trano sy ivelany
Fametrahana sy fikojakojana mora
Aza mila rafitra vy, mamonjy fotoana sy fametrahana vidiny, mety tsara amin'ny fametrahana raikitra na fanofana.
Tetikasa fametrahana amin'ny fisehoan'ny tranokala
Ny efijery tarihin'ny mangarahara dia fifanarahana amin'ny foibe fiantsenana rindrina fitaratra, toeram-pivarotana, fivarotana marika, fivarotana 4S, fivarotana firavaka, seranam-piaramanidina, fampirantiana, fampisehoana lamaody, sns.
Ity fampahalalana ity dia ho an'ny referansa anao fotsiny satria tsy mitovy ny fikirakira sy ny masontsivana ho an'ny vokatra.
Fiakarana Pixel 3.91-7.81mm
Haben'ny kabinetra 1000 * 500mm
Haben'ny Module 500 * 250mm
Drive Mode 1/7 scan
Kabary lanja 7kg
ny famirapiratry ny mazava 5500CD
Halavirana fijerena tsara indrindra 3m-50m
Hijery Angle H: 120 °, V: 120 °
Fidirana herinaratra AC110V / 220V, 60Hz
Refresh rate -30 ℃ ~ + 70 ℃
Humidity miasa 10 ~ 90% RH
Fomba fanaraha-maso NOVASTAR, LINSN, COLORLIGHT
Rafitra fikirakirana Win98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10
Certificate Taona, ROHS, FCC
Previous: Fampisehoana LED jiro eny ivelany
Manaraka: LED Lighthouse Rental Display 500x1000mm Series